मूल टाटु - "भारतीय"
जब एक टाटु "भारतीय" थियो? Oddly पर्याप्त, तर यस्ता टैटू पहिले अमेरिका को बस आदिवासीहरूले भेट्यो थिए। प्राचीन समयमा, एक आदिवासी नेता यस्तो टाटु उठयो सक्छ। साधारण नागरिकहरु टैटू जस्तै शरीर सजाउनु अनुमति थियो।
यस्तो चित्र धेरै अर्थ (तर अझै पनि रोमान्टिक विषय) छ। केही टाटु "भारतीय" प्रेमको प्रतीक हो भनेर विश्वास गर्थे। मान्छे आफ्नो प्राण जोडीलाई पत्ता लगाएर शरीर जस्तै तथ्याङ्कले सजाया।
सामान्यतया, यो "भारतीय" टाटु मानिसहरू भन्दा बढी भरी। पहिले यी तथ्याङ्कले साहस मतलब देखि यो अचम्मको छैन, छ। यस्तो टैटू रंग र monophonic दुवै हुन सक्छ। आवेदन embodiment बिना पनि छवि पहनने र चमक दिन सक्छ।
यो पनि टाटु "भारतीय" एक वास्तविक जन्तरको सम्बन्ध छ भन्ने विश्वास छ।
यस्तै आंकडा मतलब सक्छ अरू के? शक्ति र बल। यो यस कारण लागि टाटु प्राय मानिसहरू बनाउन भनेर सम्भावना छ।
केही मानिसहरू टाटु को अर्थ विशेष महत्व संलग्न छैन, र मात्र किनभने तिनीहरूले इंडियन्स वा तिनीहरूको संस्कृति पुरातन धर्मको अनुयायी भन्ने तथ्यलाई को यो भरी।
कहिलेकाहीं चित्र नियम मतलब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले क्रममा महिलाहरु मानिस महत्त्वपूर्ण (वा विपरित) छ भनेर देखाउन भरी।
यो के आकर्षित गर्न लायक छ?
सामान्यतया, एक टाटु गर्दा, अमेरिकी भारतीय (कहिले काँही प्रोफाइल मा) को एक पोर्ट्रेट रंग। यो एक घोडा मा नेता फोटो भनेर हुन्छ। यो ढाँचा बरु राम्रो देखिन्छ। यो पृष्ठभूमिमा सुन्दर दृश्यहरु द्वारा complemented छ।
केही विवरण इंडियन्स को छवि पूरक प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले तीर, पंख, टोपी र अन्य विषयगत समावेश गर्नुहोस्।
टाटु केटी, भारतीय पूरक फरक मोती र फूल को छवि बनाउँछ भने। त्यसपछि रेखाचित्र थप स्टाइलिश र रोचक हेर्न हुनेछ।
मानिसहरू अक्सर पंख तिनीहरूलाई supplementing, भारतीयहरुलाई टैटू सामना।
आंकडा कहाँ भरी? वस्तुतः मा शरीर टाटु बनाउन सक्छ कहीं "इंडियन्स।" विशेष गरी लोकप्रिय ठाउँहरू फिर्ता, हतियार र छाती छन्।
अन्तमा, एउटा सानो
अब तपाईं एक टाटु छ के थाहा "भारतीय।" हामी विस्तृत वर्णन गरेका टैटू को मूल्य। हामी यो जानकारी शरीर सजावट लागि सबै भन्दा राम्रो रेखाचित्र चयन गर्न हुनेछ भन्ने आशा। ध्यान तस्वीर विचार र मास्टर ट्रिम प्रयास लागू अघि, आफ्नो व्यावसायिकता धेरै वर्ष को लागि आफ्नो शरीर सजाउनु भन्ने समाप्त टाटु गुणस्तर निर्भर द्वारा मात्र हो।
Sunbathing र कांस्य छाला टोन किन्न अन्य तरिकाहरू पट्टियां।
Depilatory क्रीम - वर्णन, कार्य को सिद्धान्त।
रोगाणु तेल अनुहार गहुँ: आवेदन, व्यञ्जनहरु, समीक्षा
ओजोन उपचार प्रक्रिया: समीक्षा, पहिले र पछि फोटो
कसरी साँघुरो आफ्नो अनुहार मा pores?
ट्याटूमा वास्तविक दिशा steampunk छ। शैलीको विशेषताहरू
उपासनाको पार: वर्णन, स्थापना, परम्परा र रोचक तथ्य
मेक्सिकन बक्सर-प्रोफेसर चावेज जूलियो सीजर: जीवनी, फोटो
लाभ र यो पेय को हानि: को zucchini देखि रस
मनपर्ने चलचित्र Eldara Ryazanova: सूची। Eldar Ryazanov: वर्णन, षड्यन्त्र, र समीक्षा
एक भयानक रोग - लिभर सिरोहोसिस। म कसरी जिगर जाँच्न सक्छु?
भारत को क्षेत्र। धेरै भौगोलिक तथ्य
एक क्यान्सरज के हो? कारण carcinogens के पत्ता
Gennady: नाम र रूपको मान। यो Gennady र के को नाम कसरी मतलब गर्नुभयो?
छिर्न गति: सिद्धान्त, प्रकार। कमी गियर र एक अंतर ताला संग एसयूवी
मानिसले आफ्नो कान तोड्यो, के गर्न? कसरी उपचार गर्ने?
तर "Aevit": समीक्षा। Librederm: "Aevit" पौष्टिक